Awerɛhow Nkrante Antumi Yesu Maame Maria | Suasua Wɔn Gyidi
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Nepali Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
SUASUA WƆN GYIDI | MARIA
Nkrante Antumi No
MARIA nkotodwe gu fam; awerɛhow abubu no pasaa. Ɛnkyɛe koraa na wɔhyɛɛ ne ba aniɛyaa kum no yayaayaw. Ɔda so ara kae sɛnea awia ketee esum bae prɛko pɛ, ne sɛnea ne ba no teɛɛm ansa na ɔrewu no. Asase nso awosow denneennen. (Mateo 27:45, 51) Maria hwɛ nea ɛresisi no a, ɛbɛyɛ sɛ adwene a onyae ara ne sɛ gyama Yehowa pɛ sɛ obiara hu sɛnea Yesu Kristo wu no ayɛ no yaw afa.
Ná Maria resu ne ba no wɔ baabi a wɔfrɛ hɔ Golgota anaasɛ Tikora. Saa bere yi de, na hann asan apue. (Yohane 19:17, 25) Ɛbɛyɛ sɛ Maria kaakaee nneɛma pii. Ebia ade biako a ɛbaa ne tirim ne asɛm bi a esii bɛyɛ mfe 33 a na atwam no. Bere a ɔne Yosef de wɔn ba ketewa Yesu kɔɔ Yerusalem asɔrefie no, Onyankopɔn maa akwakoraa bi a wɔfrɛ no Simeon hyɛɛ abofra no ho nkɔm sɛ ɔbɛyɛ nneɛma akɛse. Nanso, ɔka kaa ho sɛ da bi bɛba a, Maria bedi yaw te sɛ obi a wɔde nkrante tenten ahwirew ne mu. (Luka 2:25-35) Nea ɛresisi yi na ɛmaa Maria tee saa nkɔmhyɛ no ase yiye.
Awerɛhow twaa Maria nsono mu
Owu biara yɛ yaw, nanso sɛ wo ba wu a, ɛyɛ yaw kyɛn biribiara. Owu yɛ ɔtamfo a ne tirim yɛ den, na otumi di obiara nya. (Romafo 5:12; 1 Korintofo 15:26) Yɛbɛyɛ dɛn agyina awerɛhow a owu de ba no ano? Sɛ yɛhwɛ nea ɛkɔɔ so wɔ Maria asetena mu fi bere a Yesu hyɛɛ ne som adwuma ase kosi Yesu wu akyi a, yebehu nneɛma pii. Yebehu sɛ gyidi na ɛboaa Maria ma ogyinaa awerɛhow a ɛte sɛ nkrante ano.
“NEA ƆBƐKA AKYERƐ MO BIARA, MONYƐ”
Ma yɛnsan yɛn akyi nkɔhwɛ nsɛm bi a esisii mfe mmiɛnsa ne fã ansa na Yesu rewu. Saa bere no, Maria hui sɛ biribi rebobɔ ba. Nasaret kurow a na ɛnso ahe biara no mu mpo, Yohane Suboni din ne adwensakra ho dawuru a na ɔrebɔ no ara na na ɛda ɔmanfo ano. Ɛnyɛ dɛn ara a, na Maria behu sɛ nsɛm a nkurɔfo rekeka no ama ne ba panyin no adwene aba so sɛ ɛbere aso sɛ ofi ne som adwuma ase. (Mateo 3:1, 13) Sɛ Yesu fi fie a, na Maria ne ne mma asetena bɛsesa. Dɛn ntia?
Ɛbɛyɛ sɛ na Maria kunu Yosef awu dedaw. Enti sɛ Yesu fi fie a, ɛbɛma wɔahwere nnipa baanu. * Mmere bi na wɔfrɛ Yesu “duadwumfo no ba,” nanso afei de na wɔsan frɛ no “duadwumfo no.” Enti ɛbɛyɛ sɛ Yosef adwuma no bedii Yesu nsam, na ɔno na na ɔhwɛ abusua no nyinaa. Anyɛ yiye koraa na Yesu wɔ anuanom baasia ka ne ho. (Mateo 13:55, 56; Marko 6:3) Ɛbɛyɛ sɛ na Yakobo ne babarima a wanyin wɔ mmofra a aka no mu, enti ebia na Yesu rekyerɛ no adwuma. Sɛ saa mpo a, Yesu a ɔyɛ ba panyin no fi fie a, na ɛbɛka abusua no paa. Maria nso, na nea ɛda no so dedaw mpo dɔɔso ma no, ɛnna Yesu nso rebefi fie. Enti, na ɛbɛyɛ no dadwen anaa? Yɛrentumi nkyerɛ. Ná wɔahyɛ Yesu ho nkɔm bere tenten sɛ ɔbɛyɛ Kristo anaa Mesia. Enti asɛm no ne sɛ: Sɛ Yesu a obiara nim sɛ ofi Nasaret no nya bɛyɛ Mesia a, dɛn na Maria bɛyɛ? Asɛm bi wɔ Bible mu a yɛkenkan a, ɛbɛma yɛahu ho biribi kakra.—Yohane 2:1-12.
Yesu kɔɔ Yohane nkyɛn ma ɔbɔɔ no asu. Saa bere no na ɔbɛyɛɛ Mesia anaa nea Onyankopɔn asra no. (Luka 3:21, 22) Ɛno akyi na ofii ase paw n’asuafo no. Adwuma a na ɛda Yesu so no, na ɛnyɛ adwuma ketewa, nanso onyaa bere ne n’abusuafo ne ne nnamfonom gyee wɔn ani. Yesu ne ne maame, ne nuanom ne n’asuafo no kɔɔ ayeforo wɔ Kana. Ná Kana yɛ kurow a ɛda bepɔw so, na efi Nasaret rekɔ hɔ bɛyɛ kilomita 13. Ayeforohyia no rekɔ so no, Maria hui sɛ biribi nkɔ yiye. Ɛbɛyɛ sɛ ohui sɛ awarefo no abusuafo no bi reyɛ huhuhuhu. Sɛɛ nsã na na asa. Saa bere no nso, sɛ obi to pon na biribi saa ba a, na ɛyɛ animguase ma abusua no paa. Asɛm no yɛɛ Maria ahometew, enti ɔne Yesu kɔkasae.
Maria ka kyerɛɛ ne ba no sɛ, “wonni nsã.” Dɛn na na ɔpɛ sɛ Yesu yɛ? Yɛrentumi nsi no pi, nanso na onim sɛ ne ba no wɔ tumi a ɔde rebɛyɛ anwonwade. Ebia onyae a, anka ne ba no fii ase wɔ hɔ ara. Ne nsɛm a ɔkae no, na ayɛ te sɛ nea ɔreka akyerɛ Yesu sɛ, “Me ba, mesrɛ wo, yɛ biribi!” Nanso ɛbɛyɛ sɛ mmuae a ne ba no de maa no no yɛɛ no nwonwa kakra. Yesu kae sɛ: “Ɔbea, dɛn na me ne wo wɔ yɛ?” Anhwɛ a obi bɛka sɛ Yesu asɛm no nkyerɛ obu, nanso ɛnte saa. Ná ɔretene Maria adwene kakra. Ná ɔrekae Maria sɛ, biribiara a ɛfa ne som adwuma ho de, ɛyɛ n’Agya Yehowa na ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ no nea ɔnyɛ, ɛnyɛ Maria.
Maria tiee ne ba no asɛm, efisɛ na ɔbrɛ ne ho ase na na ɔyɛ obi a wubu w’ani kyerɛ no mpo a, ɔte ase. Enti ɔka kyerɛɛ wɔn a na wɔrekyekyɛ aduan ne nsa no sɛ: “Nea ɔbɛka akyerɛ mo biara, monyɛ.” Maria begye toom sɛ ampa ɛnyɛ ɔno na ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ ne ba no nea ɔnyɛ. Mmom no, nea ne ba Yesu bɛka no na ɛsɛ sɛ ɔne obiara tie. Yesu yɛɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ ɔno nso, nea ato awarefo no haw no. Enti, ɔmaa nsu danee nsã. Eyi ne anwonwade a edi kan a Yesu yɛe. Dɛn na efi mu bae? “N’asuafo no gyee no dii.” Maria nso gyee no dii. Wɔamfa Yesu sɛ ne ba kɛkɛ, na mmom obuu no sɛ n’Awurade ne n’Agyenkwa.
Ɛnnɛ, awofo betumi asua nneɛma pii afi Maria gyidi no mu. Ampa, obiara nni hɔ a watete abofra bi a ɔte sɛ Yesu da. Nanso abofra de, ɔte sɛn mpo na onyin bɛyɛ panyin a, ɛnyɛ mmerɛw mma awofo no. Ɔwofo bi wɔ hɔ a ne ba nyin sɛ dɛn mpo a, onhu; ɔkɔ so ara yɛ no te sɛ nea ɔda so yɛ abofra. (1 Korintofo 13:11) Sɛ obi ba nyin bɛyɛ panyin a, dɛn na ɔwofo no betumi ayɛ aboa no? Ade biako a obetumi ayɛ ne sɛ ɔbɛma ne ba no ahu sɛ ɔwɔ ne mu awerɛhyem, na onim sɛ ɔbɛkɔ so de nea ɔresua fi Bible mu no ayɛ adwuma ma Yehowa nso ahyira no. Awofo hia ahobrɛase ansa na wɔatumi ama wɔn mma mpanyimfo saa awerɛhyem no. Wɔyɛ saa a, ɛbɛboa wɔn mma no kɛse. Mfe a Yesu de yɛɛ ne som adwuma no nyinaa, Maria boaa no, na yebetumi aka sɛ Yesu nso ani sɔɔ paa.
‘NA NE NUA MMARIMA NNYE NO NNI’
Bible mu nsɛm a ɛfa Yesu som adwuma a ɔde mfe mmiɛnsa ne fã yɛe ho no, Maria ho nsɛm a epue mu yɛ kakraa bi. Kae sɛ, ɛbɛyɛ sɛ na Maria yɛ okunafo, kyerɛ sɛ na ɔyɛ ɔbaatankoro a ebia mmofra nketewa gu no so. Enti bere a Yesu rekyerɛkyerɛ wɔ ne kurom no, sɛ Maria antumi anni n’akyi a, na ntease wom. (1 Timoteo 5:8) Nanso, Maria kɔɔ so dwinnwen Mesia ho nsɛm a wasua no ho. Afei nso, na abusua no taa kɔ hyiadan mu kɔsom, na ɛno nso Maria amfa anni agoru koraa.—Luka 2:19, 51; 4:16.
Ɛbɛyɛ sɛ bere a na Yesu rekasa wɔ hyiadan a ɛwɔ ne kurom Nasaret no, na Maria te nnipadɔm no mu bi. Bere a Yesu kae sɛ Mesia ho nkɔm bi a wɔhyɛ too hɔ dedaadaw no anya mmamu wɔ ne so no, hwɛ sɛnea Maria ani begye sɛ ɔbɛte saa asɛm no. Ɛbɛyɛ sɛ ɛhaw no sɛ ne kuromfo no nnye ne ba no nni. Ná wɔpɛ sɛ wokum no mpo.—Luka 4:17-30.
Ade biako a na ɛbɛhaw Maria paa ne sɛnea na Yesu nua mmarima no mfa Yesu asɛm nyɛ asɛm no. Yesu maame de, na ogye no di, nanso Yohane 7:5 ma yehu sɛ na Yesu nua mmarima baanan no nnye no nni. Ɛhɔ kenkan sɛ: ‘Na ne nua mmarima nnye no nni.’ Anyɛ yiye koraa no, na Yesu wɔ nua mmea baanu, nanso Bible anka sɛ wogyee no dii anaa wɔannye no anni. * Sɛnea ɛte biara no, na ɛnyɛ obiara na ogye Yesu di wɔ abusua no mu, na ɛnyɛ dɛn ara a, na ɛbɛhaw Maria sɛ wɔne n’adwene nhyia. Ná ɛsɛ sɛ Maria yere ne ho tie Onyankopɔn asɛm na ɔsan boa ne mma no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ankasa begye Yesu adi, nanso na ɛnna fam.
Ɛda bi, Yesu abusuafo yɛɛ wɔn adwene sɛ “wɔrekɔkyere” no, na ɛbɛyɛ sɛ na ne nuanom no ka ho. Ná wɔreka sɛ: “N’adwene asɛe.” (Marko 3:21, 31) Maria de, na ɛnyɛ ade a obenya saa adwene no, nanso ɔne ne mma no kɔe. Ebia na ɔte nka sɛ ɔne wɔn kɔ a, wobehu biribi ama wɔagye Yesu adi. Akyiri yi wogyee no dii anaa? Ɛwom, na Yesu yɛ anwonwade pii, na na nokwasɛm a ɔkyerɛkyerɛ no nso ka koma, nanso ne nyinaa akyi no, ne nua mmarima no annye no anni. Ɛno maa Maria paa abaw wɔ ne mma no ho anaa?
Abusua a wowɔ mu no, ɛsono obiara som anaa? Wubetumi asuasua Maria gyidi no. Bere a na n’abusuafo bi nnye Yesu nni no, wampa abaw. Mmom no, ɔbɔɔ ne bra yiye sɛnea ɛbɛyɛ a ne mma no behu sɛ ne gyidi no ma n’ani gye na ne koma nso tɔ ne yam. Saa bere no nyinaa nso na ɔyɛ nea obetumi biara de boa Yesu. N’ani gyinaa Yesu anaa? Ɛwom ara a, na etumi ba ne tirim sɛ ne ba no da so wɔ fie a anka ɔpɛ anaa? Sɛ saa mpo a, wanyɛ biribiara amma obi anhu sɛ saa na ɔte nka. Ɔfaa no sɛ akwannya bi a ɔde bɛboa Yesu. Wo nso, wubetumi aboa wo mma na ama Onyankopɔn som ahia wɔn asen biribiara?
‘NKRANTE TENTEN BEHWIREW WO MU’
Maria nyaa ne gyidi no so mfaso anaa? Obiara a onya Yehowa mu gyidi no, ɔno nso mfa ne nhyira nkame no da. Maria nso nhyira ammɔ no. (Hebrifo 11:6) Sɛ Yesu rekyerɛkyerɛ na Maria te anaa nkurɔfo a wɔatie ne ba no nkyerɛkyerɛ reka ho asɛm na ɔte a, wohwɛ a sɛn na ɔbɛte nka?
Nneɛma a Yosef ne Maria de kyerɛɛ Yesu no, ɛno ara bi na Yesu de yɛɛ mfatoho
Nneɛma a na Yesu taa de yɛ mfatoho no, ebia na ebi yɛ nneɛma a esisii ne mmofraberem wɔ Nasaret. Enti sɛ Maria te saa nsɛm no a, ɛbɛyɛ sɛ na ɛma ɔkae nea ɛkɔɔ so bere a na Yesu yɛ abofra no. Nneɛma a ɔde yɛɛ mfatoho no bi ne ɔbea a ɔrepra ne fie ahwehwɛ ne sika, ne obi a ɔreyam esiam de ato paanoo. Ebi nso fa sɛnea wɔsɔ kanea de si kaneadua so ho. Wunnye nni sɛ ebia Maria bɛkae bere a na Yesu yɛ abofra wɔ fie na Maria reyɛ saa nneɛma no nyinaa? (Luka 11:33; 15:8, 9; 17:35) Bere bi, Yesu kae sɛ ne kɔndua yɛ mmerɛw na n’adesoa yɛ hare. Sɛ Maria te saa asɛm no a, wohwɛ a dɛn na ɛbɛba n’adwene mu? Ebia ɔbɛkae bere a na Yesu yɛ abarimaa, na da koro awia bi Yosef rekyerɛ no sɛnea wɔyɛ kɔndua a sɛ wɔde to aboa bi kɔn mu a, ɛremmia no. (Mateo 11:30) Ná ɛyɛ akwannya kɛse ma Maria sɛ Yehowa de Mesia no maa no sɛ ɔntete no. Sɛ Maria dwen saa akwannya no ho a, na ɛbɛma n’ani agye paa. Onipa biara nni hɔ a na ne nkyerɛkyerɛ tu mpɔn sɛ Yesu. Ná otumi de nneɛma a obiara ani tua yɛ mfatoho wɔ ne nkyerɛkyerɛ mu ma emu da hɔ. Enti ɛbɛyɛ sɛ bere biara a Maria bɛte sɛ ne ba no rekyerɛkyerɛ no, na n’ani agye aboro so!
Eyi nyinaa akyi no, Maria kɔɔ so brɛɛ ne ho ase. Ne ba no anhoahoa no antontono no, na kampɛsɛ wasom no. Bere bi a Yesu rekyerɛkyerɛ nnipakuw bi no, ɔbea bi maa ne nne so kae wɔ nnipa no mu sɛ Yesu maame de, wanya paa sɛ wawo ba saa. Yesu kae sɛ: “Dabi, mmom, anigye ne wɔn a wotie Onyankopɔn asɛm na wodi so!” (Luka 11:27, 28) Bere bi nso na Yesu wɔ nnipadɔm mu, ɛnna nkurɔfo bɛka kyerɛɛ no sɛ ne maame ne ne nua mmarima aba hɔ. Ɛno nso, ɔkaa sɛ ne maame ne ne nua mmarima paa ne wɔn a wogye no di. Ɛnyɛ ade a na saa asɛm no bɛhaw Maria. Mmom no, na ɔne Yesu bɛyɛ adwene sɛ gyidi a obi benya wɔ Yesu mu na ehia, na ɛnyɛ ne busuani a ɔyɛ.—Marko 3:32-35.
Nanso bere a Maria hui sɛ wɔde ne ba no asɛn dua so akum no yayaayaw no, hwɛ sɛnea ne nsono mu betwa no. Ná ɔsomafo Yohane wɔ hɔ bi na wokum Yesu. Bere a ɔreka ho asɛm no, ɔkyerɛɛ mu sɛ nea ɛrekɔ so nyinaa, na Maria “gyina asɛndua no ho” rehwɛ. Ná Maria wɔ abadae, enti ogyinaa ne ba no ho araa kosi sɛ owui. Bere a Yesu sɛn dua so no, na ɔrehu amane paa. Ná ahome ne kasa mpo ayɛ den, nanso bere a ohuu ne maame Maria no, ɔkasae. Ɔde no hyɛɛ ɔsomafo Yohane nsa. Esiane sɛ na Yesu nua mmarima no nnye no nni nti, wamfa Maria annyaw wɔn, na mmom ɔde no hyɛɛ ne suani nokwafo a ɔpɛ n’asɛm no nsa. Nea Yesu yɛe no ma yehu sɛ, sɛ obi som Nyankopɔn a, ɛsɛ sɛ ɔma n’ani ku n’abusuafo ho paa, ɛnkanka wɔn som.—Yohane 19:25-27.
Ná wɔahyɛ nkɔm dedaw sɛ nkrante tenten behwirew Maria mu. Saa nkɔmhyɛ no baa mu bere a Yesu wui maa Maria dii awerɛhow kɛse no. Sɛ Yesu wu no maa Maria dii awerɛhow paa a, ɛnde sɛnea n’ani gyee ne nnansa so de, yɛnka. Maria nyaa no ntee sɛ anwonwade mu anwonwade bi asi; ná Yesu anyan! Nea ɛmaa n’ani gyee kɛse koraa ne sɛ, Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ ne nua Yakobo. (1 Korintofo 15:7) Nea Yesu yɛe no kaa Yakobo ne ne nua mmarima a aka no koma. Bible ma yehu sɛ, akyiri yi, wobegyee no dii sɛ ɔne Kristo no. Ɛyɛɛ kakra no, na wɔne wɔn maame kɔ Kristofo nhyiam, na na ‘wokura mpaebɔ mu.’ (Asomafo Nnwuma 1:14) Akyiri yi, ne nua Yakobo ne ne nua Yuda kyerɛw Bible no bi.
Maria ani gyei paa sɛ akyiri yi, ne mma mmarima a aka no bɛyɛɛ Kristofo anokwafo
Asɛm a etwa to a Bible ka faa Maria ho ne sɛ, bere bi na ɔne ne mma mmarima no wɔ Kristofo nhyiam ase rebɔ mpae. Saa asɛm no ma yehu sɛ Maria bɔɔ ne bra yiye paa de twaa sa too hɔ maa yɛn. Ne gyidi nti, awerɛhow nkrante antumi no, na akyiri yi onyaa nhyira kɛse. Sɛ yesuasua ne gyidi a, yɛn nso biribiara nni hɔ a ɛbɛto yɛn wɔ wiase bɔne yi mu a ebetumi yɛn, na nhyira a yebenya nso de, ɛnyɛ ano bi ni.
^ nky. 8 Bere a Yesu dii mfe 12 a Bible bɔɔ Yosef din kaa asɛm no, ɛno ara ne no. Efi saa bere no, wɔammɔ Yosef din bio. Yesu maame ne ne nuanom nko ara din na wɔbɔe. Bere bi, wɔfrɛɛ Yesu “Maria ba,” na wɔammɔ Yosef din.—Marko 6:3.
^ nky. 16 Ɛnyɛ Yosef yam ba ne Yesu. Enti Yesu nuanom no yɛ ne maame mma.—Mateo 1:20.